Igumbi lokulala elizimele-indawo yedolobha elikhulu - I-Airbnb
Igumbi lokulala elizimele-indawo yedolobha elikhulu
Ikamelo e-ifulethi ibungazwe ngu-Sheila
Igumbi lokulala elingu-1 noma ama-2 atholakala ku-condo enamagumbi amathathu e-Jackson enhle, e-Wyoming. Itholakala eduze kwe-Snow King Mountain Ski Area kanye nokuhamba kalula ukuya emithambekeni nakho konke okunikezwa yidolobha.
Ilayisensi Yokuqasha Yesikhashana #6656-21
Le yi-condo enezinga elihlukanisiwe, enekamelo lokulala elikhulu phezulu kanye namakamelo okulala ezivakashi angu-2 phansi ukusuka endaweni enkulu yokuhlala phansi. Amakamelo okulala amabili ezivakashi ahlanganyela igumbi lokugezela elilodwa eligcwele elisezingeni eliphansi. (Ngicela usebenzise lokhu + olunye uhlu lwami uma ungathanda womabili amagumbi okulala esivakashi ukuze uhlale.)
I-condo itholakala phansi kwe-Snow King Mountain Ski Area e-East Jackson kanye nokuhamba imizuzu eyi-10 ukuya e-Town Square. Imizuzu eyi-15 kuphela ngemoto usuka eJackson Hole Airport, kanye nemizuzu engama-25 ukuya eGrand Teton National Park kanye naseTeton Village / Jackson Hole Mountain Resort Ski Area.
4.74 · 71 okushiwo abanye
Lena indawo enhle -- ukuhamba ngezinyawo imizuzu eyi-10 ukuya edolobheni okukunikeza ukufinyelela okulula ezitolo, iziphuzo kanye nezindawo zokudlela, nezindawo zobuciko. I-Snow King Mountain Ski Area ingaphesheya komgwaqo ukuze ufinyelele kalula emithambekeni, kanye nezindawo zokudlela nebha yale ndawo.
Ngingumcwaningi wezempilo yomphakathi osanda kuthuthela endaweni esuka eBoston / Paris. Ngihlala ngimatasatasa ngomsebenzi kodwa ngizinika isikhathi sokuphuma izinsuku eziningi, ukushushuluza, ukuqwala izintaba noma ukuhamba ngebhayisikili. Ngesikhathi sokuhlala kwakho, ngizotholakala ku-condo ngihlala ekamelweni elikhulu lokulala elingaphezulu ukusuka endaweni yokuhlala evamile. Uma amashejuli evuma, hlala ukujabulela ukubloma futhi unikeze amathiphu ngezinto okufanele uzenze noma uzibone.
Ngingumcwaningi wezempilo yomphakathi osanda kuthuthela endaweni esuka eBoston / Paris. Ngihlala ngimatasatasa ngomsebenzi kodwa ngizinika isikhathi sokuphuma izinsuku eziningi, uk…